सुक्खा बन्दरगाहा समयमै बन्ने अपेक्षा ! - Nepalgunj Business
सुक्खा बन्दरगाहा समयमै बन्ने अपेक्षा !
नेपालगन्ज ः भारतीय पक्षले चासो नदिदा नेपालगन्ज नाकामा रहेको सुक्खा बन्दरगाह निमार्णको काम पुरा हुन सकेको छैन । सुक्खा बन्दरगाह काम अलपत्र पर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक भारतले सीमावर्ती जयसपुर क्षेत्रमा काँडे तारबार लगाएको छ । भारतले दसगजासित जोडेर आफ्नो क्षेत्रमा तारबार गरेको हो ।
‘भारतले आफ्नो क्षेत्रमा तारबार र पर्खाल बनाएको त देखीन्छ ,’ नेपालगन्जस्थित सघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका कार्यालयका इन्जिनियर होमनाथ भुसालले भने, ‘भारतले तारबार गरे पनि बन्दरगाहको काम लक्ष्य अनुरुप अगाढी बढन सकेको कहिले छैन ।’
जग्गा अधिग्रहणलगायत काम नोपलका तर्फबाट भइसकेको उनले बताए । बन्दरगाह निर्माणस्थलदेखि नेपालगन्जको चौलिकासम्मको २ हजार ७ सय मिटर पहुँच मार्ग नेपाल सरकारले निर्माण गरेको छ । अन्य भौतिक संरचना निर्माणका लागि भारतीय सरकारले लगानी नर्गुपर्ने हो  । इन्जिनियर होमनाथ भुसालका अनुसार पहुँच मार्ग निर्माणको काम पुरा भएको छ  । ‘हामीले पहुँच मार्ग निर्माण को काम पुरा गरयौ, बाँकी काम भारत सरकारले गर्नेछ,’ उनले भने, ‘आर्थिक बर्षमा एउटा पनि काम भएको छैन ।’
बन्दरगाह निर्माणसँगै त्यहाँ एकीकृत सुरक्षा पोस्ट (आईसीपी) स्थापना गरिनेछ । निर्माणपछि आधुनिक भन्सारको काम सुरु हुनेछ । बन्दरगाहसम्म रेलवे सेवा विस्तार हुनेछ । एकीकृत सुरक्षा पोस्टमा नेपाल–भारतका सुरक्षाकर्मीहरूले संयुक्त जाँच गर्नेछन । यसले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउनुका साथै सर्वसाधारणलाई सहज हुने विश्वास गरिएको छ । व्यापारी व्यवसायीहरूले पनि बिनाझन्झट भारतबाट विभिन्न समानहरू निर्वाध रूपमा आयात गर्न सक्ने जनाइएको छ ।
पछिल्लो पटक भारतीय अधिकारीले काम पुरा गर्न टेण्डरको प्रक्रियामा रहेको जानकारी पाएको इन्जिनियर भुसालले बताए । भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेका कारण लागत र पूर्ण डिजाइनबारे नेपालका अधिकारीहरू अनभिज्ञ छन । नयाँदिल्लीबाट सबैभन्दा नजिक मानिने नेपालको नेपालगन्जमा बन्दरगाह आवश्यक रहेको भन्दै जयसपुरलाई रोजिएको हो । बन्दरगाह सञ्चालन भए आयात सहज हुने र यहाँका जडीबुटी र उत्पादन निकासी गर्न सरल हुने जनाइएको छ ।
उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यले बन्दरगाह निर्माणमा भारतीय पक्षले सोचे अनुरुप काम तिब्रता नदिएको बताए । ‘भारतले काम गरेजस्तो गर्ने तर काम भएको छैन । ’ उनले भने, ‘सुक्खा बन्दरगाह अलपत्र पर्दै आएको छ ’ अध्यक्ष वैश्यले भारतमा निर्वाचन चलिरहेकाले पनि काममा ढिलाई भएको हुनसक्ने सम्भावना व्यक्त गर्दै त्यहा निर्वाचन सकिएपछि छिटो काम हुने आशा व्यक्त गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले नेपालगन्जमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माणमा ढिलाई भैरहेको बताए । ‘मन्त्रालयबाट नै छिटो काम अगाडि बढाउनका लागि पहल गर्न आवश्यक देखिएको छ’, उनले भने, हामि बारम्बार छलफल गरीरहेका छौ ।
प्रकाशित मितिः आइतवार, जेष्ठ २६, २०७६ 6:20:19 AM